Mabhuku akanakisa nezve Arduino | hardware yemahara
Kana iwe uri kutarisa kunyatso tenzi yeArduino yemahara hardware uye chikuva chekusimudzira, pamwe neIDE yayo uye hurongwa, iwe unofanirwa kuziva zvimwe zve. mabhuku akanakisa nezve Arduino izvo zvakagadziridzwa uye izvo hazvifanirwe kushaikwa muraibhurari yako chaiyo. Masterpieces kwauri zvemagetsi neizvi bhodhi ine microcontroller rega kukuvanzira zvakavanzika. Mukuwedzera, iwe unozogonawo kudzidza nzira yekubatanidza iyo Zvemagetsi zvigadzirwa kune mapurojekiti ako eDIY nemazvo, nhoo dziripo uye zvishongedzo, nezvimwe zvakawanda.
1 Arduino zvakadzama
2 Arduino Tricks uye Zvakavanzika
3 Dzidza zvemagetsi neArduino
4 Internet yezvinhu (IoT) ine Arduino
5 Robotics uye Basic Home otomatiki neArduino
6 Google Mubatsiri: Kuvandudzwa kweIoT zvikumbiro zveArduino uye ESP8266
7 Alexa: Kuvandudzwa kweIoT zvikumbiro zveArduino uye ESP8266
8 Kuvandudzwa kweIoT zvikumbiro mugore neArduino uye ESP8266
9 Dzidza Arduino mukupera kwevhiki
10 Arduino pasina ruzivo rwekare: gadzira yako yekutanga chirongwa mumazuva manomwe
11 Dzidza Arduino, prototyping uye advanced programming ine zana maekisesaizi
Arduino mukudzika (MITO...
Un bhuku kuti udzidze arduino, nemienzaniso yakawanda inoshanda kutanga kugadzira mapurojekiti ako ekutanga emagetsi kumba. Iri ibhuku rakapfava, iro rinodzika kusvika padanho risati ranyanya kufambira mberi, asi rakakwana kuti utange nekudzidza kuti zvemagetsi, makomputa, nezvimwewo zvinoshanda sei. Uye zvakare, ine zvemukati zvekurodha kubva kuAnaya Multimedia saiti, senge madhayagiramu emaitiro, kodhi yeArduino IDE, nezvimwe.
Arduino Tricks uye Zvakavanzika
Arduino. Tricks uye...
Rimwe remabhuku akanakisa paArduino nderimwe iro rine unogona kugadzira akawanda akasiyana prototypes, kubva kumatunhu akareruka ane maLED, kune thermostats, Arduino-based 3D printer, drones, marobhoti, nezvimwe. Neanopfuura zana nemakumi maviri matipi uye zvakavanzika zvekuve nyanzvi yeArduino nenzira inonakidza uye inoshanda.
Dzidza zvemagetsi neArduino
Dzidza zvemagetsi ne...
Rimwe remabhuku akanakisa paArduino kudzidza zvemagetsi. Mune mamwe mazwi, ine yakasarudzika yakatarisana, yakanangana nekudzidzisa iwe nezve zvemagetsi uchishandisa iyi yemahara Hardware board sechombo. Iine mifananidzo isingagumi uye nyore-ku-kunzwisisa mienzaniso yemavara, nhanho-nhanho-nhanho madhairekitori ekugadzira ako ekutanga emagetsi maseketi, dzidza kubata simbi yekunyungudutsa, tora zviyero nemultimeter, dzidza nezvemadhiyamu edunhu, nezvimwe.
Internet yezvinhu (IoT) ine Arduino
Internet yezvinhu ...
El Internet yezvinhu (IoT), chimwe chinhu chine musoro wenyaya nekuda kwemashandisirwo aanogona kuva nawo, kubva pakutarisa kana kutora zviyero kure, kusvika pakudzora zvishandiso, kuburikidza nekuita akati wandei masisitimu agovane ruzivo kana kudyidzana. Zvakanaka, bhuku rino rinotarisa chaizvo izvo, pamaitiro ekugadzira mapurojekiti eIoT uchishandisa Arduino board yekutonga. Mariri iwe uchaona mienzaniso yakawanda yekushanda newireless kana network yekubatanidza, kudzora mapurojekiti uchishandisa smartphone yako, nezvimwe.
Robotics uye Basic Home otomatiki neArduino
Robotics uye Kumba otomatiki...
Inotevera pane rondedzero yemabhuku eArduino ndiro zita iri. Kopi ine maitiro ekuita kuti utange munyika ye akakosha marobhoti uye otomatiki epamba. Rinogona kunge riri bhuku rakanaka revadzidzi vepakati kana vepamusoro vekudzidzira mabasa. Yese mienzaniso yakavakirwa pane yakakurumbira microcontroller bhodhi, uye zvese zvinonyatso kutsanangurwa, nehurongwa hwayo, makodhi, nezvimwe. Saka muhuwandu hwe28 maitiro aunogona kuzviita iwe pachako.
Google Mubatsiri: Kuvandudzwa kweIoT zvikumbiro zveArduino uye ESP8266
Uye kuenderera mberi neIoT, iri nderimwe rakakurudzirwa Arduino bhuku. Bhuku riri nyore kunzwisisa kuti utange kubva kune izvo zvekutanga kusvika kune yakaoma, uchishandisa Arduino mabhodhi, iyo ESP8266 module, uye Arduino IDE. Pfungwa yacho ndeyekukwanisa kugadzira mapurojekiti anogona kudzorwa nemirairo yezwi. uchishandisa virtual mubatsiri Google Asisstant.
Alexa: Kuvandudzwa kweIoT zvikumbiro zveArduino uye ESP8266
Alexa. Kuvandudzwa kwe...
Uye semukwanisi, kana kuti imwe nzira kune yapfuura, kune zvakare iri rimwe bhuku rine chinangwa chimwe uye nderemuunganidzwa wakafanana. Chete kuti mapurojekiti eIoT anoratidzwa semuenzaniso mune iyi nyaya anoitirwa kudzorwa neanozivikanwa chaiwo mubatsiri we Amazon: Alexa. Zvikasadaro, inogovera zvinhu zvakawanda nebhuku rapfuura.
Kuvandudzwa kweIoT zvikumbiro mugore neArduino uye ESP8266
Rimwe remabhuku Arduino uye ESP8266 yakarongerwa nyika yeIoT. Muchiitiko ichi, inotarisa pane gore, kukwanisa kugadzira mapurojekiti uye kuabatanidza kune gore uchishandisa mapuroteni akadai seHTTP, MQTT, dzidza nezve client-server architectures, publish-subscribe, REST, nezvimwe. Zvese zvakatsanangurwa nhanho nhanho uye nenzira iri nyore. Ese maitiro ane maapplication mundima dzakawanda, kubva kumushonga, indasitiri, mota, simba remagetsi, zvekurima, maguta akangwara, otomatiki epamba, nezvimwe.
Dzidza Arduino mukupera kwevhiki
Dzidza Arduino mukupera kwesvondo...
Sezvinoratidzwa nezita raro, ibhuku riri nyore rekudzidza naro zvekutanga zveArduino munguva pfupi. Usatarise bhuku rekudzika mariri, asi kuti bhuku nyore kune vanotanga vanoda kuwana iwo ekutanga pfungwa uye kutanga kuona mapurojekiti. Iwe unozodzidza zvaunoda kutanga, chii chinonzi Arduino, iyo IDE budiriro nharaunda, tanga nemapurojekiti akareruka anoshanda ane maLED, pushbuttons, potentiometers, sensors, nezvimwe.
Arduino pasina ruzivo rwekare: gadzira yako yekutanga chirongwa mumazuva manomwe
Arduino pasina ruzivo ...
Rimwe remabhuku ari paArduino kuratidza. Ndezve a 2 mu1, yekudzidza nayo kubva pakutanga, pane yekutanga hardware uye software inowanikwa. Zvose zvakatsanangurwa nenzira iri nyore kwazvo, kuti zvinzwisiswe kunyange kune avo vasina ruzivo rwekare kana dzidzo. Nezvinyorwa zvinoshanda, kuongorora zvakakosha zvemagetsi zvakakosha, nezve hurongwa, nezve Arduino IDE, uye chitsauko chine zvimwe zvinowanzoitika zvikanganiso uye mhinduro.
Dzidza Arduino, prototyping uye advanced programming ine zana maekisesaizi
Inotevera yemabhuku eArduino ndiro zita iri. Zita rekudzidza pfungwa dzakaoma kunzwisisa yezvirongwa, prototyping uye zvemagetsi, zvakaita sekuvhiringwa kwehardware, kugona zvemagetsi uye kuronga, kuongorora mumabasa akaomesesa, uye neanosvika zana maekisesaizi anoshanda ekudzidza nawo nenzira inonakidza uye nekukurumidza kupfuura dzimwe nzira dzedzidziso.
Chekupedzisira, iwe zvakare une bhuku iri mune yaro 2022 edition, iro richiri rakakura seyakapfuura editions. Mariri iwe unogona kudzidza nezve Arduino nenzira inoshanda zvachose, nemapurojekiti. Iwe haufanirwe kuve neruzivo rwemagetsi kana chirongwa, iwe uchadzidza zvishoma nezvishoma zvichienderana nemaitiro. Nezvose zvakanyatsotsanangurwa nhanho nhanho, mutauro unonzwisisika, mifananidzo uye madhayagiramu, nezvimwe. Nzira huru yekutanga neiyi bhodhi rekuvandudza uye rega fungidziro yako imhanye kusimudzira yako wega DIY mapurojekiti kupfuura mienzaniso iri mubhuku rino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Iwo gumi nemaviri mabhuku epamusoro paArduino kunyatso kwanisa bhodhi iri uye hurongwa hwayo
Iwo akanakisa oscilloscopes emapurojekiti ako emagetsi